Beddelaadaha biraawsarka Firefox ee Ubuntu 18.04 LTS | Laga soo bilaabo Linux
Ka dib markaad sameysay rakibid sax ah Ubuntu 18.04 LTS wali waxaa jira waxyaabo qaar oo la sameeyo oo wax laga beddelo si loo helo nidaam shakhsi ahaaneed iyo sida aan u jecel nahay. Markan Waxaan ku tusi doonaa waxyaabo kale oo lagu beddelayo shabakadda internetka oo Canonical ay ku jirto ugu badnaan Ubuntu 18.04 LTS.
Browser-ka asalka ah ee Ubuntu isticmaalay wuxuu ahaa Firefox, laakiin dhamaanteen ma wada jecelno adeegsiga, waa sababta aan halkan kuugu dhaafayo biraawsarro aad isticmaali karto halkii aad ka isticmaali lahayd kan. Waa inaan sheegaa in tani ay tahay iskudubarid shakhsiyeed.
Shaki la’aan mid ka mid ah tartamayaasha iyo beddelka weyn ee Firefox Muuqaal loogu talagalay in loogu beddelo Chrome-ka Firefox-ka Ubuntu waxaa loogu talagalay taageerada Flash, waa inaad xusuusnaataa in Flash-ka uu joojiyay taageerida Linux si loo adeegsado oo keliya iyada oo loo marayo add-ons.
Iyo ku darida loo sameeyay Firefox badanaa ma aha mid waxtar leh, marka lagu daro Firefox horay waxaa looga buuxiyay astaamo aan dhamaanteen isticmaalin.
para ku rakib Google Chrome Ubuntu 18.04 LTS kaliya waa inaan tagnaa goobta soo dejinta Chrome iyo hel xirmada deynta. Marka soo dejinta la dhammeeyo, waxaan ku rakibeynaa deynta maamulaha xirmooyinka aan doorbidno.
Mid kale oo ka mid ah kuwa waaweyn ee xafiiltanku kala dhexeeyo Firefox iyo Google Chrome, way iska cadahay in qaar badani dhaliili doonaan sababta loogu beddelayo Firefox-ka loo yaqaan 'Chrome' haddii adeegsiga kheyraadku uu aad ugu dhowaado. Waayahay Haddii aad rabto inaad keydiso kheyraadka Opera waa bedel aad u fiican oo wax walba ka sarreeya oo leh qaab wanaagsan. Dhinaca kale, maxaa Firefox loogu beddelay Opera, waa sababta Opera wuxuu ahaa biraawsar dan ka leh adeegsadayaashiisa wuxuuna ahaa biraawsarihii ugu horreeyay ee hirgeliya xannibaadda bogagga websaydhka ah ee doonaya inay kumbuyuutarkaaga ku qotaan cryptocurrencies.
Si aad ugu rakibto Opera Ubuntu 18.04 LTS kaliya waa inaad aadaa degelkeeda rasmiga ah iyo qaybtaada soo dejintaada waxaad ka heli kartaa xirmada deynta oo aad ku rakibi karto maamulaha xirmada aad doorbideyso.
Vivaldi kani waa biraawsar ka imanaya gacanta mid ka mid ah xubnihii hore ee Opera, kaas oo go'aansaday in la abuuro bedel ka Opera ah, maadaama uusan ku qanacsaneyn isbeddelada lagu sameeyay biraawsarkan inkasta oo Vivaldi ay ku dhiirrigelisay waxyaabo badan oo Opera ah.
Wali waa ikhtiyaar aad ufiican oo badal u ah Firefox.
Si loo rakibo waa inaan furnaa terminal oo aan fulino amarradan soo socda:
Ugu dambeyntii waxaan ku rakibnaa:
Kani waa biraawsar in Waxay ku saleysan tahay Webkit, waxay leedahay interface dhexdhexaad fudud, biraawsarkan waxaa loogu talagalay inuu noqdo ikhtiyaar khafiif ah oo ku saabsan shabakadaha shabakadaha, wuxuu leeyahay dhammaan howlaha caadiga ah ee aad ka filan laheyd biraawsarka webka. Waxaa ku jira calaamado, taariikh iyo tab. Intaas waxaa dheer, RSS quudinta waxaa wax looga qaban karaa aqristaha RSS ee kujira, 3 waxay leedahay xayiraad xayeysiin ah oo leh qalab lagu rakibay AdBlock, Flash content block oo leh Click2Flash.
Si loo rakibo Qupzilla gudaha Ubuntu 18.04 LTS, waxaan ka sameyn karnaa xarunta softiweerka Ubuntu ama waxaan furi karnaa terminal oo aan ku fulin karnaa amarka soo socda:
Es shabakad fudud oo webkit ah oo loo yaqaan waxtarkeeda, waxay u isticmaashaa GTK qaabkeeda garaafyada sidaa darteed waxaa lagu ordi karaa iyada oo aan dhibaato lagu qabin kombuyuutarrada ku saleysan tan sida Gnome, Xfce ama LXDE, waxay leedahay suurtogalnimada isticmaalka tabs ama windows, maareeyaha fadhiga, kuwa ugu cadcad ayaa lagu keydiyay XBEL, mashiinka raadinta wuxuu ku saleysan yahay OpenSearch.
Si loo rakibo Midori Ubuntu 18.04 LTS waa inaan tagnaa degelkeeda rasmiga ah iyo soo dejiso xirmada deynta ka soo degso qaybteeda. Marka soo dejinta la dhammeeyo, waxaan ku rakibi karnaa xirmada maamulaha xirmooyinka aan doorbidno.
La'aan dheeraad ah, kuwani waa xulashooyin kooban, waxaa jira xulashooyin kale oo badan. Haddii aad ogtahay wax kale oo aan ku dari karno, ha ka waaban inaad la wadaagto faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Beddelka loogu talagalay biraawsarka Firefox ee Ubuntu 18.04 LTS
Waxaan ka doorbidaa beddelka Ubuntu 18.04 ee biraawsarka Firefox, tusaale: Debian, dhadhan kasta oo kale oo Ubuntu ah, ...
Jawaab Diego Regero
Midori waa Chrome, markaad furto horay ayey u muujineysaa
Waxaad illowday inaad ku darto tan: https://yourgeekweb.com/es/2018/03/05/navegador-del-futuro-brave/
Waxay ka timid isla abuuraha Firefox iyo aasaaska Mozilla.